‘‘खेल स्वास्थ्यका लागि, खेलकुद राष्ट्रका लागि हो’’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘‘खेल स्वास्थ्यका लागि, खेलकुद राष्ट्रका लागि हो’’
२०७१ श्रावण ५, सोमबार ०४:०७ गते
in अन्तर्वार्ता, खेलकुद
साक्षात्कार होमनाथ सापकोटा
रत्ननगर–५ चित्रसारी निवासी किरण श्रेष्ठ तेक्वान्दोका राम्रा र सम्भावना बोकेका खेलाडी हुन् । श्रेष्ठसँग तेक्वान्दो खेलको २० वर्षको लामो अनुभव छ । सौराहा तेक्वान्दो डोजाङबाट प्रशिक्षण सुरू गरेका उनी अहिले चित्रसारी तेक्वान्दो डोजाङका अध्यक्ष पनि हुन् । चितवन तेक्वान्दो संघको संस्थापक कोषाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ हालैमात्र तेक्वान्दोको अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक बन्न सफल भएका छन् ।
विश्व तेक्वान्दो एकेडेमी (कुकिवान) कोरियाको आयोजनामा सम्पन्न ३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो मास्टर कोर्ष २०१४ मा भाग लिई उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकको मेडल पाए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक भएसँगै तेक्वान्दोको विकास र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहने श्रेष्ठले बताएका छन् । उनीसँग तेक्वान्दोको विकास र नेपालमा खेलकुदको अवस्थाका बारेमा चितवन पोष्ट दैनिकले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः
१) तेक्वान्दो खेल कहिले र कहाँबाट सुरू गर्नुभएको हो ?
– मैले तेक्वान्दो खेल २०५१ सालबाट सुरू गरेको हुँ । तर, २०५३ सालदेखि सरकारी मान्यता प्राप्त नेपाल तेक्वान्दो संघमा भर्ना भई सौराहा तेक्वान्दो डोजाङमार्फत गुरूहरु यादव कुँवर र पुष्पराज जोशीसँग प्रशिक्षण लिएको हुँ ।
२) तेक्वान्दो खेल खेल्न कसले प्रेरणा दिएको हो ?
– यो खेलप्रति म आकर्षित हुनुको कारण मेरा अभिभावक नै हुन् । विशेषगरी, मेरो मामा कमल श्रेष्ठ र माइजू विमला श्रेष्ठको प्रेरणाले तेक्वान्दोमा प्रवेश गरेको हुँ । सानै उमेरदेखि मलाई तेक्वान्दोप्रति रूचि थियो । मैले सोच्ने गर्थें, एक दिन म पनि यो खेलको ठूलै पदमा पुग्ने छु । सोहीबमोजिम नै मैले मेहनत गर्दै गएँ र प्रगति गर्न पनि सफल भएँ ।
३) तपाईं विदेशमा पनि प्रशिक्षण लिएको खेलाडी हो । विदेश र नेपालको तेक्वान्दोको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
– तेक्वान्दो विश्वव्यापी खेलका रुपमा विकास भइरहेको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरुमा सरकारले खेललाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । सरकारको आवश्यक सहयोग नपाएका कारण नेपालमा तेक्वान्दोको अवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । तर, अन्य मुलुकमा भने तेक्वान्दोले नै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाएको छ । मैले कतारमा टप माउन्टेन तेक्वान्दो संघ कम संस्थापक प्रमुख गणेश गुरूङसँग प्रशिक्षण लिने र अन्य खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षण दिने काम गरेको छु ।
४) तेक्वान्दो कस्तो खेल हो ? यो कहाँबाट सुरू भएको हो ?
— तेक्वान्दो खेल कोरियाबाट सुरू भएको हो । यो खेल नेपालमा २०४६ सालदेखि भित्रिएको हो । खेल भित्रिएसँगै नेपालमा यो खेलप्रति रूचि राख्नेहरुलाई सिकाउन थालिएको हो । तेक्वान्दोको पनि भिन्दाभिन्दै अर्थ छ । ते भन्नाले खुट्टा, क्वान भनेको हात र दो भन्नाले कला हो । यसलाई समष्टिमा भन्दा तेक्वान्दो हात र खुट्टाको कला हो । यो खेल आत्मसुरक्षा र स्वच्छ रहन खेलिन्छ ।
५) हालैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कोर्ष गर्नुभयो, कस्तो अनुभव रह्यो ?
– यसलाई मैले आफूले गरेको निरन्तरताको प्रयासको प्रतिफलका रुपमा लिएको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक भइसकेपछि चुनौतीहरु पनि छन् । मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । चुनौतीलाई सहज रुपमा लिएर जिम्मेवारी वहन गर्दै तेक्वान्दो खेलको विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहने छु ।
६) तेक्वान्दो खेलको विकासका लागि तपाईंको योजना के छ ?
यो खेलको विकासका लागि म आफैँ यसमा निरन्तर लागिरहने र युवायुवतीहरुलाई तेक्वान्दो खेलप्रति आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने प्रयासहरु जारी राख्ने छु । खेलले कुलतमा लागेका युवायुवतीहरुलाई पनि सही बाटोमा ल्याउन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई तेक्वान्दो प्रशिक्षण दिएर नयाँ भविष्य दिने अभियान सुरू गर्दैछु । त्यतिमात्र होइन, अनाथ आश्रममा रहेका बालबालिकालाई पनि तेक्वान्दो खेलाउने योजनामा रहेको छु । सुरूवातका लागि मैले रत्ननगरमा रहेको सहाराको घरमा आश्रित बालिकाहरुलाई तेक्वान्दो सिकाउन सुरू गरिसकेको छु ।
७) खेल मानिसका लागि किन आवश्यक छ ?
– खेल स्वास्थ्यका लागि, खेलकुद राष्ट्रका लागि हो । मान्छे स्वस्थ रहन केही न केही खेल्नुपर्छ । खेलले मानव शरीरमा ७० प्रतिशत औषधिको काम गर्छ । त्यसैले, निरन्तर खेल खेल्न जरूरी छ । अर्को कुरा, खेलले देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचित गराउँछ । व्यक्तिको लागि मात्र खेल होइन, राष्ट्रका लागि पनि खेलिनुपर्छ ।
८) खेलकुदको विकासका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
– सुरूमा सरकारले खेलाडीहरुको जीविकोपार्जनको आधार खडा गरिदिनुपर्छ । बाँच्न सक्ने आधार भयो भनेमात्र खेलाडीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान खेलमा केन्द्रित गर्न सक्छ । अर्को कुरा, नेपालमा खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । देशका विभिन्न ठाउँमा रंगशाला, कबर्ड हल र स्टेडियम निर्माणको जरूरी छ ।